Ungayibuka kanjani i-iPad ku-TV | iPhone News
U-Ignacio Sala | 17/04/2022 12:00 | iPad, Okokufundisa namanyuwali
Impela uke wacabanga izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ungayibuka kanjani i-ipad ku-tv ukuze ujabulele okuqukethwe kwedivayisi yakho esikrinini esikhulu. Ukubuka i-iPad kumabonakude kulungele ukujabulela imidlalo yethu esiyintandokazi usebenzisa i Lawula umyalo.
Kuwusizo futhi ikakhulukazi ukubuka izithombe namavidiyo esiwagcine kudivayisi yethu, ukubuka amavidiyo avela ku-YouTube, ukusakaza izinkundla zevidiyo... yebo iTV yethu ayihlakaniphi ngendlela ebesingathanda ngayo.
Ukubona i-iPad kumabonakude sinezinketho ezimbili:
1.1 umbani kuya kukhebula le-hdmi
1.2 Ikhebula le-USB-C kuya ku-HDMI
2.2 Ama-smart TV anikwe amandla i-AirPlay
2.3 I-Amazon FireTV
3 Thumela okuqukethwe nge-AirPlay kumabonakude
3.1 Buka uhlelo lokusebenza lwe-iPad ku-TV nge-AirPlay
3.2 Buka ividiyo ye-iPad ku-TV nge-AirPlay
Ukusebenzisa ikhebula ukubuka i-iPad kumabonakude kuyindlela elula futhi, ngaphezu kwalokho, yehlisa ukubambezeleka kube ziro. Uma ufuna ukujabulela imidlalo oyikhonzile ku-TV ngaphandle kokubambezeleka (ukubambezeleka kwesignali), ukusebenzisa ikhebula kuyisixazululo esingcono kakhulu.
Kuye ngemodeli ye-iPad, sizodinga a umbani noma ikhebuli ye-USB-C kuya ku-HDMI.
umbani kuya kukhebula le-hdmi
Uma idivayisi yakho inokuxhumeka kombani, udinga umbani kuya kukhebula le-hdmi, ikhebula esingalithenga kokubili ku-Apple Store nakuyo Amazon ngaphansi kwama-euro angama-20.
Inkinga ngezintambo ze-Amazon ukuthi abanye abakhiqizi, bathi ikhebula ligunyazwe yi-Apple (MFI seal), nakuba kungelona iqiniso.
Uma ingaqinisekisiwe ngokusemthethweni yi-Apple (kunzima ukuyisho), i-adaptha ingase isebenze ekuqaleni, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, cishe izoyeka ukusebenza.
Ngaphambi kokukhetha ikhebula elilodwa noma enye, kuhle ukuthi ufunde ukubuyekezwa komsebenzisi. O, khokha ngaphezu kwama-euro angama-50 ukuthi ikhebula elisemthethweni libiza ku-Apple Store.
Uma sesixhuma i-iPad kumabonakude sisebenzisa umbani kuntambo ye-HDMI, isithombe esivela ku-iPad sizoqala ngokuzenzakalelayo ukuvela kusikrini sikamabonakude, ngaphandle kokuthi senze izinguquko ku-iPad.
Ngalolu cingo, isibuko se-ipad sesikrini ku-tv. Uma sivala isikrini, ukusakaza kuzoma.
Ikhebula le-USB-C kuya ku-HDMI
Uma i-iPad yakho ihlanganisa imbobo ye-USB-C, udinga ikhebula le-USB-C. I-USB-C iye kwi-HDMI. Ngokungafani nezintambo zombani, ungasebenzisa noma iyiphi ikhebula etholakalayo, njengoba iyindinganiso, ayidingi noma yiluphi uhlobo lwesitifiketi.
Vele, ungakhethi isixazululo esishibhe kakhulu uma ufuna ukujabulela okuqukethwe okuvela ku-iPad yakho ngekhwalithi engcono kakhulu nokuthi, ngokuhamba kwesikhathi, ingxenye ye-USB-C ayilimele, njengoba kuyiyona esizoyithinta ukuyixhuma kudivayisi yethu.
Uma sesixhuma i-iPad kumabonakude sisebenzisa ikhebula le-USB-C kuya ku-HDMI, isithombe se-iPad sizovezwa ngokuzenzakalelayo ku-TV ngaphandle kokuthi senze izinguquko ku-iPad.
Njengoba nje sisebenzisa umbani kuntambo ye-HDMI, uma sivala isikrini, ukusakaza kuzoma, ngakho-ke ayilungele ukudla okuqukethwe okuvela ezisekelweni zevidiyo ezisakazwayo.
Indlela more elula futhi kulula ukuyibuka i-iPad ku-TV isebenzisa ubuchwepheshe be-Apple AirPlay.
Nge-AirPlay, singaphinda isikrini sedivayisi yethu (ukugcina isikrini sivuliwe) noma thumela okuqukethwe ngefomethi yevidiyo ukudlala okuqukethwe ngokuvala isikrini sedivayisi yethu.
Nakuba i-AirPlay iwubuchwepheshe bokuphathelene ne-Apple, eminyakeni yamuva isiqalile ukuyinikeza ilayisensi ukuze abanye abakhiqizi bakwazi ukuyisebenzisa kuma-smart TV.
Uma sifuna ukusebenzisa i-AirPlay sinezinketho ezi-3:
Ama-smart TV anikwe amandla i-AirPlay
Idivayisi engcono kakhulu yokujabulela ukusebenza kwe-AirPlay i-Apple TV, idivayisi ye-Apple isebenza njengehabhu le-HomeKit nokuthi, ngaphezu kwalokho, kusivumela ukuthi sijabulele noma yikuphi ukusakaza ividiyo yesikhulumi
Ukuba uxhumano olungenantambo, sizohlala sithola ukubambezeleka okuthile uma sifuna ukuphinda isikrini kumabonakude, ngakho-ke akulungile ukujabulela imidlalo lapho noma yiluphi uhlobo lokubambezeleka lungathinta ukudlala kwegeyimu noma ukuzizwisa komsebenzisi.
I-Apple TV eshibhe kakhulu i-Apple okwamanje enikezayo emakethe imodeli ye-HD Inentengo yama-euro ayi-159 futhi ine-32 GB yesitoreji.
Uma ufuna jabulela amavidiyo e-4K ngokusakaza bukhoma kuzomele ukhokhe I-199 euro okubiza imodeli eshibhe kakhulu, imodeli etholakala nasezinguqulweni ezino-32 no-64 GB wesitoreji.
Samsung, LG y Sony ukunikeza ngamamodeli asezingeni eliphezulu, usekelo lwe-AirPlay. Ngale ndlela, singasebenzisa umsebenzi oyinhloko we-Apple TV ngaphandle kokuwuthenga.
Uma ucabanga ukuvuselela ithelevishini yakho endala futhi ufuna ikugcine iminyaka embalwa, kufanele khetha imodeli enikezela ngokusekela lobu buchwepheshe.
Inketho eshibhe kakhulu yazo zonke esikubonisa zona kulesi sigaba ukuze ukwazi ukujabulela i-AirPlay ukubuka i-iPad kumabonakude ukuthenga enye yezinhlobo ezahlukene. Amamodeli we-Amazon Fire TV.
Futhi ngithi ishibhile, ngoba imodeli eshibhe kakhulu yamadivayisi we-Fire TV we-Amazon iyona I-Fire TV Stik Lite, ebiza ama-euro angama-29,99, nakuba ngezinye izikhathi singayithola nge- isaphulelo sama-euro angu-10 ngentengo yaso evamile.
Ngokomdabu, ama-Fire TV azihambisani ne-AirPlay, kepha, singangeza ukuhambisana nale protocol usebenzisa uhlelo lokusebenza I-AirScreen, uhlelo lokusebenza olutholakala mahhala esitolo sezinhlelo zokusebenza ze-Amazon Fire TV.
Thumela okuqukethwe nge-AirPlay kumabonakude
Cha es lo mismo thumela isithombe sisuka ku-iPad siye kumabonakude kunokuthumela okuqukethwe kwenkundla yevidiyo yokusakaza kumabonakude.
Lapho uthumela isithombe sisuka ku-iPad siye ku-TV, sibuka isikrini, ngakho-ke uma siyivala, ukudlala kuzoma.
Kodwa, uma sithumela isithombe sisuka endaweni yokusakaza ividiyo noma uhlelo lokusebenza lokudlala amavidiyo, singacisha isikrini se-iPad ngenkathi ukudlala kuqhubeka.
Buka uhlelo lokusebenza lwe-iPad ku-TV nge-AirPlay
Sivula uhlelo lokusebenza umdlalo noma uhlelo lokusebenza esifuna ukuyibonisa kumabonakude wethu.
Sifinyelela iphaneli yokulawula ngokuswayipha ukusuka kwesokudla phezulu kwesikrini.
Okulandelayo, sichofoza ku- amawindi amabili agqagqene.
Ekugcineni, sikhetha igama ledivayisi lapho sifuna ukubonisa khona isithombe.
Khumbula, uma ucisha isikrini, ukwenza isibuko kuzoma.
Buka ividiyo ye-iPad ku-TV nge-AirPlay
Sivula isidlali sevidiyo noma inkundla yevidiyo yokusakaza-bukhoma esizothumela kuyo okuqukethwe nge-AirPlay.
Siqala ukudlala okuqukethwe bese uchofoza isikwele esinonxantathu ngendlela yamagagasi (lesi sithonjana singavela noma kuphi esikrinini)
Ngemuva kwalokho a bhala zonke izisetshenziswa ezihambisanayo nge-AirPlay.
Sikhetha idivayisi lapho sifuna ukubona okuqukethwe.
Uma ukudlala sekuqalile, singacisha isikrini se-iPad yethu ngaphandle kokumisa ukudlalwa kwevidiyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungayibuka kanjani i-iPad ku-TV
watchOS 9: Esicabanga ukuthi siyakwazi ngohlelo olulandelayo lwe-Apple Watch
Uyithola kanjani i-beta yomphakathi ye-1Password 8 ku-iPhone noma i-iPad yakho